China Fithem ks-011b mozika tsy misy rano Bluetooth vozony mihantona gaming headset mpanamboatra sy mpamatsy | Kaiwansi
Fithem ks-011b mozika tsy misy rano Bluetooth vozona mihantona headset lalao
Ny endrik'ilay vokatra dia silika gel. Ity karazan-doha ity dia tsy hahatsapa ny lanjan'ilay loha-doha rehefa anaovana ny hatoka.
1. Ny endrik'ilay vokatra dia silika gel. Ity karazan-doha ity dia tsy hahatsapa ny lanjan'ilay loha-doha rehefa anaovana ny hatoka.
2. Ny fitaovana outsourcing dia azo namboarina mifanaraka amin'ny zavatra takian'ny mpanjifa. Ny fonosana fitaovana sy sary famantarana dia tsara tarehy ihany koa ary mahafaly ny vinan'ny besinimaro.
Ny ao ambadiky ny fonosako dia miorina tsara amin'ny mainty toy ny ao ambadika, ary ny lafiny fotsy, fotsy sy mainty no lamaody, ary ny fomba famolavolana ankapobeny dia mavitrika kokoa. Ny sarin'ny telefaona eo afovoan'ny boaty dia mazava raha vao jerena, ary miseho miharihary eo imason'ny olona izany. .
3. Ny tantera-drano azo ampiasaina dia tena tsara. Ny haavon'ny rano dia IPx5. Na dia tsy afaka mampihena ny tabataba aza izy io dia afaka mampihena ny tabataba ara-batana. Tena mifanakaiky ny tadin-tsofina sy ny sofina. Io dia mampihena be ny feo ivelany ary mahatsapa ny fihenan'ny tabataba. Ny elatry ny sofina amin'ny vombon'ny antsantsa koa dia tena tsara fa tsy hianjera ny loha loha noho ny fampihetseham-batana mahery mandritra ny fanatanjahan-tena, ary ny lakilen'ny fiasan-doha koa dia tsotra be ihany. Ampidirina amin'ny takelaka roa tsiroaroa koa. Misy ihany koa ny tariby famandrihana usb, ary koa ny boky torolàlana momba ny vokatra sy ny karatra fiantohana.
Valiny matetika 20Hz-20KHz
Fahaizan'ny bateria 220mAh
Fotoana fampiasana 300ora
4. Ny fampiasana ny écouteur dia mety ho an'ny mpampiasa, mitovy amin'ny earphones Bluetooth mahazatra. Rehefa mampiasa azy voalohany ianao dia tsindrio ary tazomy ny bokotra fiasa mandra-pitselatry ny jiro manga haingana ao anaty fanjakana tsy hiditra, miditra ao amin'ny fomba fampifangaroana ianao, mahita ity KS-011B ity amin'ny fitaovana, ary azonao ampifandraisina izany.
Teo aloha: Fithem Ks-009SBlu Bluetooth lalao an-tariby tsy misy rano sy lohahevitra an-trano fialamboly
Manaraka: Ks-008 fitheman'ny Waterproof gaming bluetooth headset headset sy boaty headset mpanampy tsara ho an'ny birao fanatanjahan-tena sy fialamboly